Switching on GNS3 with Cisco IOU ~ Root Of Info
Switching on GNS3 with Cisco IOU
on January 08, 2015 in Networking with No comments
အခုေြပာမည့်အ ေြကာင်းက ေတာ့ GNS New Version မှာ ပါ၀င်လာတဲ့ IOU Features ကိုအသုံးချပြီး အရင်တုန်းက ကွျန်ေတာ်တို့ Cisco Switching ပိုင်းေလ့လာရင် simulator မရှိတဲ့အခက်အခဲ ကို အခု IOU Features ကိုအသုံးပြုပြီး ေလ့လာလို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အခု post လိုမျိုး google မှာ အရင်ထဲက သူများေတွ ေရးထားတာကြာေနပါြပီ လုပ်ရမည့် steps ေတွလဲ များတဲ့အတွက် မှတ်မိေအာင် ေရးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး အသုံးပြုမယ့် Requirement ေတွကိုေအာက်မှာပြထားပါတယ်။ တစ်ကယ်က IOU (IOS On Unix) ကို Cisco က လူေတွသာ Private အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် အပြင်ကိုအခု GNS3 New Version ဖြစ်လာမှသာ အသုံးပြုနည်းေတွအလွယ်တကူ ေပါ်လာတာဖြစ်လို့ ေအာက်က Requirement ေတွထဲက "Cisco IOU Image" "iourc.txt" file ေတွကို public download မတင်ေပးေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့် Resource Link ေတွ ေပးထားပါမယ်။
1. GN33New Version
2. Oracle Virtual Box
3. Cisco IOU Image ( Torrent site ေတွမှာ download ချလို့ပါတယ် )
4. GNS3IOU VM.ova ( Virtual Box မှာတင်ပြီးအသုံးပြုရန်အတွက် )
5. iourc.txt file ( Cisco IOU License file )
iourc.txt file နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ေဆွးေနွးထားတာေတွကို အခုလင့် မှာ ဖတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
1. Import GNS3 IOU VM to Oracle Virtual Box
အရင်ဆုံး downloadချထားတဲ့ .ova file ကို Virtual Box ထဲသုိ့ Import လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ေအာက်မှာပြထားပါတယ်။ Virutal Box file menu => Import Appliance က ေန ေရွးရမှာပါ။
Note: ပုံထဲမှာေတာ့ OVA ရဲ့ default RAM က 2GB ဖြစ်ေနပါတယ်။ မိမိစက်အ ေပါ်မူတည်ပြီး RAM ကို Customize လုပ်ပါ။ ဒါေပမယ့် အခု ova အ ေပါ်ကို base ယူပြီး IOU ေတွ run မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် 2gb ေလာက်ေတာ့အနည်းဆုံး recommand ထားသင့်ပါတယ်။
အခုပုံမှာေတာ့ import လုပ်ပြီး၍ စမ run ခင် အရင်ဆုံး network adapter setting မှာ "Host Only Adapter" ဖြစ်ေနရပါမယ်။
အခု OVA ကို Run လိုက်ပြီး login ၀င်မည့်ေနရာမှာ "Username=root" "password=cisco" default ေပးထားတဲ့ အတိုင်း login ၀င်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
OVA ထဲက ip ေခါ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျလာတဲ့ ip address က VM ဧ။်Network Setting မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ "HOST ONLY Adapter" က ေန ip ချ ေပးတာဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်ဖက် Windows7က ေန VM ထဲကို Host Only Adapter ip "192.168.56.1 to 192.168.56.101" ကို ping test လုပ်ြကည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
2. Configuring GNS3 for Using IOU
အခု GNS3 ကို အ ေပါ်မှာ Run ထားတဲ့ OVA VM နဲ့ ချိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ေအာက်ကပုံမှာ configuration လုပ်ရန် GNS3 ကိုဖွင့်ပြီး "edit => peference" ကိုဖွင့်ထားတာပါ။
ေအာက်ကပုံမှာ GNS3 Server ထဲကို၀င်ပြီး Local Server ဧ။် "host binding" မှာ "192.168.56.1" ကိုေရွးပြီး "Remote Server" Tab ထဲမှာေတာ့ VM IOU ဧ။် IP Address "192.168.56.101" ကို add လုပ် ေပး ရမည်။
ထို့ေနာက် "IOS On Unix" ကိုေရွးပြီး General Setting ထဲမှ "Path to IOURC" Browse မှာ အ ေပါ်မှာ ေပြာခဲ့တဲ့ iourc.txt file ကိုပတ်လမ်းေကြာင်းေရွးေပးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ေနာက် "Server setting" ထဲမှာ IOU VM ဧ။် IP ရှိေနရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မရှိပါခဲ့ရင် အ ေပါ်က Remote Server IP မှာ add မလုပ်ခဲ့လို့ပါ။
3. Uploading IOU Images To GNS3 via Web Browser
အခု IOU Images ေတွကို GNS3 ထဲသုိ့ Import လုပ်ေတာ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သ ေဘာတရားက ေတာ့ IOU VM ရဲ့ IP "192.168.56.101" ကို web browser က ေနလှမ်းေခါ်ပြီး IOU Images ေတွကို upload လှမ်းခေါ်မှာပါ။ ပြီးရင် GNS3 ထဲက ေနလှမ်းယူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Web Browser က ေန "192.168.56.101:8000/upload" ဆိုပြီးရိုက်ပါ။ Page ကျလာ လျှင် "browse" ကိုနှိပ်ပြီး IOU Images ကိုေရွးပြီး "upload"ကိုနိှပ်ပါ။ ထိုေနာက် Page ထဲတွင် IOU images နှစ်ခု upload လုပ်ပြီးသွားတာကိုေတွ့ရပါမည်။ IOU မှာ "l2" သည် switch ကိုသတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပြီး "l3" က Router ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
4. Adding and Using IOU Image on GNS3
အခု GNS3 Edit => Preference ကိုဖွင့်ပြီး "IOU Device" under "IOS On Unix" ကိုနှိပ်ပါ။ထို့ေနာက် "New" ကိုနှိပ်လျှင် IOU Image ထည့်ရမည့် boxတစ်ခုကျလာမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးလျှင် New IOU Device ဆိုတဲ့ Box မှာ Name, IOU Image, Type ေတွကိုေရွးေပးရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ Name က ေတာ့ အခုထည့်မည့် IOU Image Type 'L2' or 'L3' ေပါ် မူတည်ပြီး ေပးလို့ရပါတယ်။ Name က optional ပါ။ အ ေရးကြီးတာက IOU Image လမ်းေကြာင်းေပးတဲ့ေနရမှာပါ။ IOU Image လမ်းေကြာင်းကို ခုနက browser ဖွင့်ပြီး upload လုပ်တားတဲ့ list ကို copy ကူးပြီး အခုေနရာမှာ past ပြန်ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Type ေနရာမှာ "l2" ကို upload လုပ်ထားရင် "L2 Image" ကိုေရွးေပးရပါမယ်။ ပြီးသွားရင်ေတာ့ GNS3 ထဲမှာ L2-SW ဆိုတဲ့ IOU Image တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
အ ေပါ်ကပုံစံအတိုင်းပဲ Router IOU Image ကိုထပ်ထည့်ထားတဲ့ပုံစံပါ။ ေနာက်ဆုံး GNS3 ထဲမှာ L2-SW ရယ် L3-RW IOU Image နှစ်ခု ေရာက်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
5. Switching via using L2-SW IOU in GNS3
အခုဆိုလျှင် လုပ်ငန်း Process အားလုံးပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပြီး အရင်က Cisco CCNP Switch ဘာသာမှာ တစ်ချို့ Chapters ေတွ က "Packet Tracer" နဲ့ စမ်းလို့မရခဲ့တဲ့ထဲက "private vlan" command ဆိုလျှင် အခု ဒီ New GNS3 IOU features နဲ့ ေလ့လာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားဟာေတွလဲ အများကြီးစမ်းလို့ရပါတယ်။ Example အ ေနနဲ့ "private vlan" command ကိုထုတ်ပြတာပါ။